Khasaaraha Qaraxyadii lagu weerarey Hottel Naasa Hablood oo sii badanaya Dhimasho iyo dhaawacba.
Tababar loo furey qaar kamid ah shqaalaha wasaarada dastuurka o ay qabatey Hay’adda EISA.
DHacdadii Bariire oo Xukuumadda Soomaaliya Gudi Baaritaan ku sameeya u Saartey.
Xildhibaanada Barlamaanka Fedaeralka oo Isu Diyaarinaya in la Magacaabo Gudiga Doorashada Gudoomiyaha Barlamaanka.
Xoolo dhaqatada somalida Kenya oo xildhibaan Aadan Ducaale ugu baaqey in ay nabad ku wada noolaadaan.
Hoggaamiyaha aqlabiyada ee Kenya Aadan Ducaale oo ah nin Soomaalida Kenya ah ayaa ugu baaqay xoolaleyda Kenya gaar ahaan dhanka waqooyi ee Kenya inay nabad ku wada noolaadaan ayna joojiyaan colaado dhawaan dhacay. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in si dagdag ah loo qabto shir nabadeed kaasoo loo qabanaayo...
Mareykanka oo mar kale ku celiyey hanjabaad ka dhan ah ururka ISIS isagoo kordhinaya duqeynta xaga cirka.
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa sheegay in ciidanka Mareykanka ay sii xoojiyaan duqeynta ay ku hayaan kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ah ee ka dagaalanta Suuriya iyo Ciraaq. Obama ayaa sheegay inuu qirsan yahay in dagaalka uu adag yahay loona baahan yahay in horumar deg-deg ah laga sameeyo. Wuxuuna hadalkaan...
Qaxootiga Dhadhaab oo afar meelood meel u diyaarsanyihiin in ay soomaaliya ku laabtaan.
QM ayaa sheegtay in ku dhawaad 70,000 oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida ah ee Dhadhaab ay muujiyeen rabitaankooda inay doonayaan in Soomaaliya loo celiyo. QM ayaa xogtaa soo saartay shalay Isniintii. 70 kun ayaa ah meel afar meelood markii loo dhigo qaxootiga Soomaalida ah ee ku xareysan xeryaha Dhadhaab. Haataan ayaa...
Safaaradii soomaalidu ku laheyd YEMEN oo laga rarey Sanca loona rarey Cadan.
Dawlada Soomaaliya ayaa safaaradeedii Yemen ka rartay caasimadii Yemen ee Sanca una rartay Cadan. Cadan ayaa haatan ah caasimada kumeel gaarka ah ee Yemen ee dawlada sida waziirka arimaha dibada ee Yemen uu asbuucaan sheegay. Dawlada Yemen ayaa wakaalada wararka ee dalkaa ee SABA u sheegtay in tillaabada Soomaaliya ku...
Duleedka Magaalada Baydhabo oo Qarax lala Beegsadey Gaadiid ay la socdeen Askar ka tirsan M/K/galbeed.
Inta la xaqiijinayo ilaa 7 Askari oo isugu jira ciidamada maamulka Koonfur galbeed iyo kuwa Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa lagu dilay qarax miino dulleedka magaalada Baydhabo. Ciidamadan oo ka soo baxay degmada Waajid ayaa la sheegay in ay ku sii jeedeen dhinaca magaalada Baydhabo, balse wax...
Haddalo Dabayaal Doorashadii Somaliland oo ay is Weydaarsanyaan M/weynaha Guusha Muranka Lihi Raacdey iyo C/ramaan Cirro.
Gudoomiyaha xisbiga WADDANI iyo masuuliyiin la socota ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay dagaalkii labadda beelood ee Dararweyne ee gobolka Sanaag, waxaanu sheegay in xalina dirirta labadan beelood ee soo noqnoqday ay waajib ka saaran yahay xukuumadda. “Xisbi ahaan waxaanu maana soo booqanay dadkii reer Somaliland ee ku dhaawacmay dagaalkii...